Fomba Efatra Iantsoana Antsika - Dieter F. Uchtdorf
Fomba Efatra Iantsoana Antsika
Nataon’ny Filoha Dieter F. Uchtdorf
Mpanolotsaina Faharoa ao amin’ny Fiadidiana Voalohany
Te hanolotra fomba iantsoana efatra [aho] … izay mety hanampy antsika hahatakatra ny anjara toerantsika tsirairay eo amin’ny drafitra mandrakizay an’Andriamanitra sy ny mety hahatongavantsika amin’ny maha mpihazona fisoronana antsika.
Ry rahalahiko malala sy namako tiako isany, maha feno fankasitrahana sy fifaliana ny foko ny miaraka aminareo. Midera anareo aho ry raim-pianakaviana sy ry dadabe izay nitondra ny zanakareo sy ny zafikelinareo lahy. Miarahaba anareo aho ry zatovolahy izay nisafidy ny ho eto anio. Ity no toerana tena tokony hisy anareo. Manantena aho fa tsapanareo ny firahalahiana izay mampiray antsika, ary mivavaka aho mba hahatsiarovanareo ho tamana sy hahatsiarovanareo fanohanana sy finamanana eto anivon’ireo rahalahinareo.
Isika lehilahy indraindray dia mamaritra ny tenantsika amin’ny alalan’ny fomba iantsoana antsika. Maro amintsika no manana fomba maro iantsoana antsika, ary ny tsirairay amin’izy ireny dia milaza zavatra manan-danja mikasika ny maha isika antsika. Ohatra, ny fomba iantsoana sasany dia mamaritra ny anjara toerantsika ao anatin’ny fianakaviana, toy ny hoe zanakalahy, na rahalahy, na vady na ray. Ny fomba iantsoana hafa dia mamaritra ny anton’asantsika eo amin’izao tontolo izao, toy ny hoe dokotera, na miaramila na mpanamory fiaramanidina. Ary ny sasany dia mamaritra ny antso hazonintsika ato amin’ny Fiangonana.
Anio aho dia te hanolotra fomba iantsoana efatra izay inoako fa azo ampiharina amin’ny mpihazona fisoronana rehetra maneran-tany—fomba iantsoana izay mety hanampy antsika hahatakatra ny anjara toerantsika tsirairay eo amin’ny drafitra mandrakizay an’Andriamanitra sy ny mety hahatongavantsika amin’ny maha mpihazona fisoronana antsika ato amin’Ny Fiangonan’i Jesoa Kristy ho an’ny Olomasin’ny Andro Farany.
Zanaky ny Ray any An-danitra
Fomba iantsoana iray izay mamaritra antsika rehetra, amin’ny lafiny faran’izay fototra indrindra, ny hoe zanaky ny Ray any An-danitra. Na iza isika na iza eo amin’ny fiainana ary na inona na inona ataontsika dia tsy tokony hadinointsika mihitsy hoe fanahy zanak’Andriamanitra ara-bakiteny isika. Zanany isika talohan’ny nahatongavana teto amin’ity tany ity, ary mbola ho Zanany mandrakizay. Io fahamarinana fototra io dia tokony hanova ny fomba fiheverantsika ny tenantsika, sy ireo rahalahy sy anabavintsika, ary ny fiainana mihitsy.
Mampalahelo anefa fa tsy misy amintsika izay tena miaina araka io fomba iantsoana antsika io, “fa samy efa nanota [isika] rehetra ka tsy manana ny voninahitra avy amin’Andriamanitra.”1
Mety mahakivy indraindray ny mahafantatra ny dikan’ny hoe zanakalahin’Andriamanitra ianao kanefa tsy mahavita azy araka izany. Tia manararaotra izany fahatsapana izany ny devoly. Aleon’i Satana ianao mamaritra ny tenanao amin’ny alalan’ny fahotanao toy izay amin’ny alalan’ny hery anaty izay mety hahatongavanao ho tahaka an’Andriamanitra. Ry rahalahy isany, aza mihaino azy.
Samy efa nahita zaza miana-mandeha isika rehetra. Mandroso kely izy aloha dia mivembena. Ary mianjera. Moa ve itezerantsika izany andrana izany? Mazava ho azy fa tsia. Ray toy ny ahoana no hanasazy zaza iray noho ny fianjerany? Amporisihana izy, sy tehafana ary deraina, satria isaky ny mandingana kely indray mandeha ilay zaza dia miha mitovy amin’ireo